ढाड किन दुख्छ? कसरी कम गर्ने? – Palika Times
पालिका टाईम्स ३१ जेठ २०७७, शनिबार प्रकाशित
३१ जेठ, काठमाडौं । सबैलाई घरमा बसेर बोर लागेको होला। धेरै सुत्दा, टिभी हेर्दा, मोबाइल र ल्यापटप चलाउँदा ढाड र कम्मर दुख्ने समस्याले सताएको होला! अहिलेको अवस्थामा ढाड र कम्मर दुखाइबाट कसरी बच्ने, दुखेपछि के गर्ने भन्ने सामान्य ज्ञान भयो भने सजिलै बच्न सकिन्छ।
ढाड दुखाइ के हो र कम्मर दुखाइ अर्थात् ‘साइटिका’ के हो भन्ने बुझ्न हामीले हाम्रो मेरुदण्डको बनोटबारे बुझ्न जरुरी छ।
भुइँमा घोप्टो सुत्ने। च्युँडोले भुइँ छुवाइराख्ने। दुवै खुट्टा सिधा राख्ने। दुवै हातलाई हिप नजिकै राख्ने। विस्तारै श्वास तान्दै बायाँ खुट्टा कम्मरभन्दा मुनिको भाग तनक्क तन्काई करिब एक फिट भुइँबाट उठाउने र मनमनै १ देखि १० गन्ने। त्यसपछि बिस्तारै श्वास छोड्दै खुट्टा भुइँमा राख्ने। ध्यान दिनुपर्ने कुरा खुट्टालाई धेरै उठ सबैलाई घरमा बसेर बोर लागेको होला। धेरै सुत्दा, टिभी हेर्दा, मोबाइल र ल्यापटप चलाउँदा ढाड र कम्मर दुख्ने समस्याले सताएको होला! अहिलेको अवस्थामा ढाड र कम्मर दुखाइबाट कसरी बच्ने, दुखेपछि के गर्ने भन्ने सामान्य ज्ञान भयो भने सजिलै बच्न सकिन्छ।
दिनहुँको आन्दोलन र भीडभाडले संक्रमण भयावह हुन सक्ने
राजतन्त्रले गुमाएको नेपाली भूमि गणतन्त्रले फिर्ता ल्याउँदैछ : प्रचण्ड